Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Education » Ebe Nlekọta Onyinye nyere $ 2 nde na Caribbean na Asia
Akụkọ gbasara Anguilla • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Sri Lanka • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism
N'oge ọ dị ka ihe niile anyị na -anụ kwa ụbọchị bụ akụkọ gbasara ọnwụ, ụjọ, ngagharị iwe, na mpụ, ọ na -adị mmụọ mma ịnụ maka ihe na -aga nke ọma n'ụwa. Dị ka nde dollar a na -enye obodo iji kwado agụmakwụkwọ. N'ime ụdị echiche ahụ, ÀNI Private Resorts kwupụtara na o meela nde $ 2 maka akụrụngwa ụlọ akwụkwọ na kọmpụta na mpaghara obodo ọ bụla n'ime ala ha nwere.
Mba ọ bụla ga -anata onyinye nke $ 500,000 nke ndị ụlọ oriri na ọ Privateụ Àụ ANI na Tim Reynolds Foundation na -akwado.
Ebumnuche a bụ ịgbasa mmụta sayensị Kọmputa ma melite akụrụngwa agụmakwụkwọ, dị ka ịkwalite ọba akwụkwọ, na klaasị na mba ebe enwere ebe ezumike nkeonwe.
Nke a na -eme ka mkpebi ụlọ ọrụ ahụ sikwuo ike inye aka na agụmakwụkwọ na ịkwado obodo.
Mwube iji mepụta ụlọ nyocha kọmpụta ọhụụ na ha abụọ Anguilla na Sri Lanka ga -amalite mgbe afọ a gasịrị, ụlọ akwụkwọ elementrị ọhụrụ n'obodo Rio San Juan ga -esochi ya. Resorts Nkeonwe ÀNI na ndị nkuzi Thai na -akparịta ụka ugbu a iji chọpụta ebe $ 500,000 ga -aba uru. Tim Reynolds na ÀNI nwere obi ụtọ inwe ike ịnye mpaghara obodo akụrụngwa ume ọhụrụ na nke ọgbara ọhụrụ iji baara ha uru ugbu a na maka ọgbọ ndị na -abịa n'ihu.
Tim Reynolds, onye nchoputa/onye nwe ụlọ oriri na ọ Àụ Àụ ÀNI, bụ onye ọrụ ebere nke nwere nkwa siri ike iji melite nka na akụrụngwa agụmakwụkwọ gburugburu ụwa. O nyekwala nnukwu onyinye na nyocha ahụike na akụrụngwa - ya onwe ya bụ onye lanarịrị nnukwu mmerụ ahụ ọkpụkpụ azụ. Tim weputara ego anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla Ụlọ akwụkwọ Nkà Art na Thailand, Anguilla, Sri Lanka, US, na Dominican Republic iji nyere ndị na-ese ihe aka imezu nrọ ha dabere na nka site na usoro mmụta zuru oke na eserese. Na mgbakwunye na mmemme agụmakwụkwọ, agụmakwụkwọ na -enyere ụmụ akwụkwọ aka ịre ahịa ma ree ọrụ ha gburugburu ụwa site na ngosi ihe ngosi, yana ntanetị site na webụsaịtị ebe a na -eme ihe nkiri: ÀNI Art Gallery. 100% nke ego enwetara site na ire nka nka na -aga ozugbo ndị na -ese ihe.
Reynolds ji nganga na -egosi ihe osise sitere n'aka ụmụ akwụkwọ na ebe ntụrụndụ ya na ndị ọbịa nwere ike zụta ihe osise mbụ dị ka ihe ncheta nke ọnụnọ ha n'ụlọ akwụkwọ mahadum.
“Nhọrọ na ịdị mma nke ihe osise sitere n'aka ụmụ akwụkwọ na isii n'ime Ụlọ akwụkwọ Nkà Mmụta Ihe Ọmụma ÀNI dị nnọọ ịtụnanya. Anyị ga -aga n'ihu gụchaa ndị omenkà site na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ruo ọtụtụ iri afọ ma nwee obi ụtọ maka akụrụngwa ọhụrụ a na -ewu iji gbasaa usoro mmụta anyị n'ime obodo, "Reynolds kwuru.
Tim Reynolds kwubiri, "ÀNI na -agbasi mbọ ike ibuli obodo anyị na ndị obodo na -ebuli elu na site n'iwepụta kọmpụta na ịzụlite akụrụngwa sayensị kọmputa, ụmụ akwụkwọ ga -enwe ike ịmụta na ibi ndụ dị mma na -agaghị ahapụ obodo ha."